Ukuseviswa kuzo zonke izingxenye neyesifunda - isihluthulelo ekusebenzeni noma iyiphi imoto. Kodwa uma yahlatshwa aqala ukuphelelwa amandla, noma musa ngisho ukusebenzisa "ku hot", bese kufanele kuthathe ukuxilonga injini. Ngalesi test, ngosizo imishini ekhethekile alinganise ingcindezi kule amasilinda injini. Le nqubo ibizwa ngokuthi kokucindezelwa test. Yiqiniso, lokho akusho ngaso sonke isikhathi nethuba ngiphendukele ochwepheshe ukulungisa ngokuzenzakalela. Ngakho-ke, sizobheka namuhla, indlela ukuhlola kokucindezelwa e injini ngendlu.
Ngokuvamile, leli qiniso kubonisa umoya ingcindezi kule amasilinda we the yangaphakathi omlilo injini ekupheleni iphuzu unhlangothi kokucindezelwa ngesikhathi ukujikeleza ukuziqalela crankshaft. Ukuxilonga yenjini Vaz nezinye izimoto eziningi ezifuywayo ku kokucindezelwa kwenza ukuzimisela esinembile yenkinga specific injini. Ngakho injini akusho alandele Ukudilizwa ngisho esinqunyiwe.
Kungani lesi silinganiso incipha ngokuhamba kwesikhathi?
Isizathu ukwehlisa ingcindezi kule amasilinda injini kungaba isikhathi iphutha isici. Kodwa ngokuvamile kungenxa zemvelo bafake izindlela piston. Kodwa noma ngabe kunjalo, ukucindezela ephonsa nomthelela obonakalayo amandla injini kanye Imininingwane petrol.
Yini enye kuthinte kokucindezelwa we yangaphakathi omlilo engine?
Ngokuvamile, izinguquko ingcindezi kule amasilinda Ziningi izizathu ezabangela lokho. Amaphuzu alandelayo kumele ukuhlukanisa phakathi kwabo:
Engalungile valve imvume. Kufanele kuqashelwe ukuthi imvume ezincane kungaholela lokuvala kamuva ngenxa lapho ingcindezi kule amasilinda is kakhulu ziyancipha. Ingase futhi ukushintsha engela kushaft crank, lapho kokucindezelwa nayo iyancishiswa kakhulu.
motor lokushisa. Kule ipharamitha kuncike umsebenzi eziningi yezingxenye injini, ngokukhethekile, valve efanayo. I ephansi izinga lokushisa, ezincane igebe. Ngakho, ingcindezi kule amasilinda nayo iyancishiswa.
ukuvuza abahlukahlukene ngokuningiliziwe, okuyinto uphawu ngalo ingaphakathi omlilo ekamelweni.
Ngaphansi yimiphi imibandela injini yokusebenza, zlib kuyoba ephelele? Amathuba emoyeni ukuvuza ngokusebenzisa izimbobo ehlukahlukene kuyoba esincane kuphela uma:
Lolu dengezi uzoba kahle round ukuma.
Piston izindandatho Ubuningi bamahora uvalwe eduze komunye nomunye.
Uma uyikha phezulu le zokusebenza uMbhalo longitudinal izingozi lingekho.
Igebe e sivala ikhala eduze zero.
zezinhlangothi valve esiphezulu eseduze esihlalweni.
Isilinganiso injini kokucindezelwa Kwenziwa?
Ngenxa yale njongo kukhona idivayisi ekhethekile. Ibizwa ngokuthi Ukuminyanisa. Okwamanje, cishe wonke amamodeli yayo anemisila adapters esikhethekile onobuhle ezahlukene izinjini. Kokucindezela uvame asetshenziswe "ekhaya" izimo, ngenkathi Imisebenzi eprofetjhinali for ukuthi ukusetshenziswa kwamafoni okuthuthukile - kokucindezelwa umhloli, kanye motor abahloli.
Yikuphi ukushiyeka kungatholakala ngokusebenzisa kokucindezelwa umhloli?
Ngokusebenzisa le divayisi ekhaya, ungakwazi ngesandla ichaze inombolo yangaphakathi omlilo injini eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa. Ngokwesibonelo, uma kokucindezelwa is ukhulise, kungase kubonise ukuthi umonakalo, okuyothi lapho uphuma khona emoyeni kwakubusa valve kwakhiwa. Uma kulesi silinganiso esifanayo, kwabangela ukwanda okukhulu kwaleli nani (isb, 1-m kokucindezelwa unhlangothi ingcindezi ezingeni elilingana eziphindwe ezintathu, futhi phambili ke luyanda eziyisishiyagalombili), lokhu likhombisa bafake piston anemifantu, izindandatho noma udonga isilinda. Lapho ichopho usesimweni ovulekile futhi lapho ingcindezi ushintsho ebonwe nemingcele cishe uyoba burrs noma zikhubazekile e valve injini phezu isilinda. It kungabuye coking izindandatho noma nokutubeka of valve kanye piston. Nokho, uma izinguquko idatha kuyilapho umphini ivaliwe, kufanele sinake isimo izindonga omlilo ekamelweni. It zingase zimiswe imifantu. Ngaphezu kwalokho, ushintsho kokucindezelwa kuleli cala, libhekisela "hang" umphini. Nokho kungase kube nokutubeka gasket isilinda ikhanda.
Indlela hlola zlib isilinganiso yenjini ngezandla zabo? mayelana zikagesi
Njengoba sishilo phambilini, kudingeka abe idivayisi ekhethekile - Ukuminyanisa. Ngalo thina uhlole lizinga kwengcindezi isilinda yenjini ngayinye. compressometer Ubude kukhona ezimbili zama:
With tip threaded. Ukuxilonga kubo screwed emgodini inhlansi ipulaki.
Nge Pressure ithiphu. Lapha, nesilinganiso idatha senzeka ngemva ngokucindezela obukhulu iraba grommet emgodini emotweni inhlansi plugs.
By endleleni, le kokucindezelwa e injini diesel kukalwa idivayisi kuphela amathiphu isikulufa. Ngaphezu kwalokho, compressometer enjalo asidingi amakhono athile futhi enekhono lapho yokulinganisa ingcindezi. kakhulu sitholakele izimoto engenziwa nge umsizi noma wedwa.
Lungiselela motor kuya izilinganiso
Ngaphambi kokuqhubeka kokucindezelwa nesilinganiso, kubalulekile ukuxoxa injini ukuze yokusebenza lokushisa (hhayi ngaphansi kuka 80 degrees Celsius). Futhi, ngaphambi kokuba aye emsebenzini, hlola icala battery. Uma liphansi, uqiniseka ukushaja ngaphambi uphethwe. Enye indima ebalulekile yokulinganisa kokucindezelwa udlala ukuziqalela ezimbi. Lapho ephenduka motor nge imvamisa engaphansi kuka-200 ngomzuzu, lokhu ukuhlola imoto ngeke nje engenamsebenzi ngenxa umehluko omkhulu okhona lobufakazi. Uma ngabe kahle, ungathola ngokuphepha ukusebenza.
Ngakho, indlela ukuhlola kokucindezelwa e injini ngezandla zabo? Okokuqala sidinga uyasikrufulula zonke izintambo inhlansi ipulaki, bese ususa ngamunye ngamunye amakhandlela. Ngaphezu kwalokho, kufanele ngelulela ukulandelana ukuthi ungakwazi ke isikulufa ucezu ngalunye endaweni yayo. abashayeli abaningi abathi: "Kungani kubalulekile ukuba uyasikrufulula wonke amakhandlela?" Impendulo yalo mbuzo silula. Iqiniso lokuthi isivivinyo kokucindezelwa lapho amakhandlela screwed ngeke unike umphumela olunembile. Zonke amanani ekushintshashintsheni eseduzane, okungaqondile noma ezinkulu kuphela. Ngakho-ke, akunakusetshenziswa akufanele unscrewed ikhandlela elilodwa kuphela injini.
Kodwa ukuba babuyele emsebenzini. Njengoba ukufunda okwengeziwe esithathwayo we kokucindezelwa injini? Ngemva amakhandlela ukuze ukhubaze wonke izintambo nokuvikeleka yamandla aphindeke kabili kusukela coil. Okulandelayo, uma une-injini kaphethiloli kanye futha yohlobo mechanical, susa hose nophethiloli. Ngakho kuzovimba ukugeleza fuel ku uMbhalo. Uma injector kanye kagesi fuel futha, donsa idivayisi edluliselwe noma athathe intambo kuzo zonke Imibhobho esemzimbeni. Ngemva kwalezi manipulations, ungaqala izilinganiso.
Indlela Yokusebenzisa Ethi Ukuminyanisa? Okokuqala sidinga bayifaka ekupheleni imbobo inhlansi ipulaki, bese ucindezela phezu isinyathelo igesi (okwamanje evulekile mpintsha) kanye ukuziqalela, ngakho waphenduka injini. Ngakho ukwenza kuze kube isikhathi lapho idatha izinga kokucindezelwa umhloli akusho kunciphe. Ngemva kwalokho ubhala idatha ku notebook futhi qiniseka kwilebula ingcindezi isilinda lapho siye kulinganiswa nje. Ngemva kwalokhu, kabusha imingcele kuya Ukuminyanisa bese uya uMbhalo esilandelayo. Thina akubheke ngendlela efanayo.
Ngemva ingcindezi elinganisiwe yazo zonke amasilinda, ukuqoqa zonke izici oda reverse futhi uqhubekele ukuhlaziywa idatha.
Ukuze uqonde ukuthi umphumela omuhle inikezwe injini, udinga ukuba ne "Isiqondisi Somsebenzisi sika" imodeli nohlobo lwakho imoto. Kube kufanele ahlathululwe amagugu normative izinkomba ngqo lolu hlobo injini. Ngokuvamile, evamile kokucindezelwa injini Vaz 2107-2170 onobuhle ezisukela 9.5 kuya ku-10 izikhathi eziphindwe. It is uvunyelwe ukushintshashintsha elincane amagugu - kuya ku-1 emoyeni. Uma kokucindezelwa yezimoto yakho kwaba mayelana 8.5-11 eziphindwe, kuba inkomba okukhulu. Kodwa futhi, ukuze senze izibalo esinembile, udinga ukuba ukuphathwa kanye nezincwadi ngqo ukuthi imodeli injini.
Kodwa uma VALUE etholwe ngezansi 8.5 eziphindwe, ngakho injini has a iphutha, okuyinto nakanjani kudingeka zixazululwe. Ukuze ukuzisho, uzodinga 10 ml amafutha engine. Sigcwalise kube uMbhalo bese ukuphinda nesilinganiso.
Uma ngabe idatha kakhulu anda, ngize ngibe oda ezidlula ephakeme kunaleyo evamile kule izilinganiso okwalandela ku 2nd, isilinda 3rd futhi 4th kungenzeka unenkinga ku plunger. Lokhu kungaba izinto zokulala noma bafake izindandatho. Ukuxazulula le ukwehluleka, kufanele isethwe injini full Decarbonizer. Kodwa uma ezingeni kwengcindezi uMbhalo lamahubo lilingana, inkinga itholakala valve - okungukuthi kufanelekile abo ampofu. Ngokuvamile, ukuthi kokucindezelwa ezinjalo kuyehla imbangela nokutubeka valve. Lokhu kwenzeka ngokuvamile kakhulu ngenxa imifantu ku piston noma kabi ezigugile isilinda ikhanda gasket. Ngalesi test injini kokucindezelwa usuphothuliwe.
Indlela yokuthola indawo esiqondile zokugwema ukuphuka?
Ngenxa yalesi sidinga compressor. Okulandelayo, udinga ulandela imiyalelo. Ekuqaleni isethi piston isilinda (okuyinto hlola) ukuze BMT. Ngokulandelayo, wafaka imoto kwi ukubopha manual ujike igiya 4th. Ngemva kwalokhu ukusebenzisa le compressor futhi pressurizes uMbhalo. Kulokhu, udinga ukuqaphelisisa kahle lapho umoya avuzayo. Uma ubona shweza kule amasilinda elilandelayo cishe kwenzeka isampula isilinda ikhanda gasket. Kulokhu, kufanele esikhundleni salo. Uma umsindo ofanayo kutholakele enhlokweni, inkinga itholakala i itheku noma esidayisa valve. Ukuhlonza ukuwohloka uhlelo injini Ukupholisa, udinga uyasikrufulula cap ethangini ukunwetshwa. Lapho amaphutha Bubbles izinhlamvu ziqala ukwakheka ku emelana nokubanda enhlanzini yasezindaweni.
Ngakho, thina esiphethweni kanjani ukuhlola kokucindezelwa e injini kuphela.
Kungani isidingo lineman immobiliser
Qasha nge-limo umshado
Ibhulashi yokuqalisa: esikhundleni izandla zabo
Uhlelo lokujikeleza nokuphefumula kwezilwane ezincelisayo. Izitho ezenza uhlelo lokujikeleza lwezilwane ezincelisayo
Ihhotela "Alara Kum" (Turkey / Alanya): incazelo, isivakashi pool, ukudla
Art. 154 we Tax Code nekuphawula. Isigaba 1, Article. 154 we Tax Code
Berezovskaya GRES - iziteshi ezimbili, amazwe amabili